मुना २०६७ साउन – मझेरी डट कम
दिउँसो साथीहरूसँग घुम्न जाँदा ग्रीष्मले बाटोमा चट्पटे र फोहोर पानी खाएको थियो । अहिले साँझ उसलाई बेस्सरी पेट दुख्न थाल्यो । चिसो बरफ पनि खाएको थियो । साँझ परेपछि उसलाई हनहन जरो पनि आउन थाल्यो । ग्रीष्मको आमा-बाबु चिन्तित हुन थाल्नुभयो । ग्रीष्म पनि पेट दुख्यो भनेर कराउन थाल्दा बाबाले डाक्टर अङ्कललाई फोन गर्नुभयो ।
अहा ! हृवाइट हाउस ! चिटिक्क परेको र हिउँझैँ सेतो ! सेतो बलौटे पत्थर र सिंहमर्मरबाट बनेको ! आकर्षक ! अमेरिकाका राष्ट्रपतिको सरकारी निवास र कार्यालय ! पानीको भव्य फोहरा र धूपीका बोटहरूले सिङ्गारिएको ! हेर्न पाउँदा रमाइलो लाग्यो ।
पहाडको फेदीमा मेरो घर छ
गाउँको पुछारमा नदी बग्दछ
नजिकै जङ्गलमा मृग घोरल छन्
मयुर नाच्दछन् कोइली गाउँछन्
शिक्षा हो नव ज्योति हजुरको ज्ञानको मुहान दिने,
यै हो ज्योति दिने यो विश्वमा आखाँ खुलाइ दिने ।
शिक्षा पढौँ भाइ बहिनीहरू विद्वान् बन्ने गरौँ
शिक्षाले व्यवहार परिवर्तन गरी विश्वमा शान्ति छरौँ ।
मेरो प्यारो नेपाल भूमि
पवित्र भूमी, ज्ञान भूमि
शान्त भूमी, दिव्य भूमि
प्राण भन्दा प्यारो जय-जय जन्म भूमि
एउटा गाउँको एउटा घरमा उसकी आमा र राम मात्र बस्दथे । रामको बुबा पैसा कमाउन विदेश गएका थिए । त्यो घरमा कहिल्यै पनि राम्रो हुन सकेन । लक्ष्मी पनि त्यस घरदेखि पर-पर भाग्थिन् ।
म एक दिन बिहानै पोखरी पुगेँ जहाँ घमण्डी माछो, चलाख भ्यागुतो र मूर्ख सर्पहरू बस्दथे । म त्यहाँ प्रत्येक दिन जस्तो पुग्दथेँ । जहिले जाँदा पनि त्यो घमण्डी माछोले त्यहाँका भ्यागुताहरूलाई दुःख दिइरहेको हुन्थ्यो । त्यहाँका सर्पहरूले पनि त्यस माछोलाई केही गर्न सक्दैन थिए ।
फुच्चे घर छाड्दैन
‘मेरा त खेल्ने साथी पनि छैनन् । म कोसँग खेलूँ ?’ जिज्ञासु आमासँग प्रश्न गर्दै तल ओर्लियो ।
पानी परेर आँगन चिप्लो थियो । ऊ आँगनमा चिप्लेर डङ्रङ्ग पछारियो । आठ वर्षे जिज्ञासुले चारैतिर पल्याकपुलुकक हेर्‍यो । वरिपरि कोही पनि थिएनन् । ऊ जर्‍याकजुरूक्क उठ्यो ।
शीर्षक के हो ? (मुना २०६७ साउन)
कुनै गाउँमा फुर्के नाम गरेको केटो बस्दथ्यो । उसलाई छिमेकीहरू ‘फुर्के’ माइला भनेर बोलाउँथे । उसको स्वभाव अनौठो किसिमको थियो । कसैले उसलाई केही काम लगायो भने फुरुक्क भएर गरिहाल्थ्यो । उसको बुबाले उसलाई पढाउन विद्यालय पठाउने निधो गरे । उनले गाउँको एक विद्यालयमा उसलाई भर्ना गरिदिए । शिक्षकहरूले पनि उसको व्यवहार अनुसार अर्ति, उपदेश दिएर पठाउन थाले ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको एउटा गाउँमा ख्याउटे बोकाको जन्म भएको थियो । त्यस घरमा राजु भन्ने सात वर्षको बालक पनि थियो । राजुले ख्याउटेलाई सानैदेखि असाध्यै माया गर्थ्यो । त्यस घरमा राजु, उसकी बहिनी रीमा, बा, आमा र उसका हजुरआमा पनि बस्नुहुन्थ्यो ।
माथि माथि आकासको कुनै ग्रहमा स्वर्ग नाम गरेको एउटा देश थियो । त्यो देशका नागरिकहरूमा इमानदारी र अनुशासन भगवान्ले कोची कोची हालिदिएका थिए । सबैले सबैलाई आदर गर्थे । देशले बनाएको व्यवस्था अनुसार सबै नागरिकहरूले ठीक समयमा ठीक काम गर्थे । मान्छेहरू लगायत त्यहाँका जीवहरू जन्मनासाथ नवजवान हुन्थे र नवजवान नै रहिरहन्थे । त्यहाँ सधैँ वसन्त ऋतुमात्र भइरहन्थ्यो ।